Day One On တွင်အမိန့်အာဏာဖြင့် Bernie Sanders သည်ဆေးခြောက်ကိုတရားဝင်ဖြစ်စေနိုင်ပါသလား။
ပထမနေ့တွင် Bernie Sanders သည်ဆေးခြောက်ကိုတရားဝင်ဖြစ်စေမည်လော။ PodCast တွင်နားထောင်ပါသို့မဟုတ် YouTube ပေါ်တွင်ကြည့်ပါ Bernie Sanders သည်ပထမနေ့တွင်ဆေးခြောက်အားအမှုဆောင်အမိန့်ဖြင့်တရားဝင်. သူသည်၎င်းကိုအမှန်တကယ်လုပ်နိုင်မနိုင်ရှာဖွေပါ - သူသည် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် Donald Trump ကိုအနိုင်ယူလျှင် - သူသည်အနည်းဆုံးဒီမိုကရက်များအားလုံးကိုကျော်ဖြတ်သကဲ့သို့အိုင်အိုဝါ၏ရှုပ်ထွေးသောရှုပ်ထွေးမှုတွင်သူပါနိုင်ခဲ့သည်။
ဆက်စပ်မှု post: ဆေးခန်းဆိုင်ရာအချက်အလက် - ဤတွင်နှိပ်ပါ။
"Bernie Sanders ကဆေးခြောက်တရားဝင်မှုကိုမကြိုက်သည့် ၁% ကိုရပ်တန့်ရန်နှင့်၎င်းကို ၉၈% ကိုပေးလိုကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဘီလျံနာသူတစ်ယောက်ကဆေးခြောက်ကိုအလုပ်အမှုဆောင်အမိန့်ဖြင့်တရားဝင်ခွင့်ပြုခြင်းကိုမတားဆီးနိူင်သော်လည်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကဘယ်လိုလဲ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် Tom ပါ။ သင်သည်ဆေးခြောက်ရှေ့နေအားရှာဖွေခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဆေးခြောက်စက်ရုံရှေ့နေကိုရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုရှာတွေ့နိုင်သည်။ ထိုလုပ်ငန်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်အရင်းအမြစ် - ကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်ပေးသော - Bernie Sanders သည်အမှုဆောင်အရာရှိမှဆေးခြောက်ကိုတရားဝင်ကြေငြာနိုင်သလား။ အရေးယူမှု?
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂ အရအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကိုဥပဒေအားပြenfor္ဌာန်းရန်ခွင့်ပြုထားသည်။ Donald Trump ကပုဒ်မ ၂ ကသူ့အားသူလိုချင်တာကိုလုပ်ခွင့်ပေးသည်ဟုထင်မြင်သည်။ ဆောင်းပါး ၂ ကဘာကိုတိတိကျကျပြောသလဲ၊ သူသည်ဥပဒေများကိုသစ္စာရှိစွာကွပ်မျက်ခြင်းကိုဂရုပြုရမည်။ အပိုဒ် ၂ အပိုင်း ၃ ။
အကျော်ကြားဆုံးအမှုဆောင်အမိန့်ကဘာလဲ။ ၁၈၆၃ ခုနှစ်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကြေငြာချက် - ၁၃be ပြင်ဆင်ချက်သည် ၁၈၆၅ မတိုင်မီအထိဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဖြစ်သော်လည်း Abe လင်ကွန်းသည်ကျွန်စနစ်ကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်မကိုက်ညီဟုယူမှတ်ခဲ့သည်ဟုဆိုလိုသည်။
၁၉၅၂ တွင်သမ္မတထရူမန်းသည်သံမဏိစက်ရုံအားလုံးကိုဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်သို့အပ်နှံခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်ရာဘီနီစဲန်ဒါသည်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကိုလျော့နည်းစေသည်၊
Trumans ၏လုပ်ရပ်သည်အလွန်ဝေးလွန်းသည် - ၎င်းသည်လုပ်ရပ်ကိုရှင်းလင်းမည့်အစားဥပဒေပြုရန်ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်သည်။ ထိန်းချုပ်ထားသောပစ္စည်းများသည်အက်ဥပဒေသည်ရှေ့နေချုပ်အားပစ္စည်းဥစ္စာများကိုစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်ပြန်လည်စီစဉ်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည် - ဆိုလိုသည်မှာအုပ်ချုပ်ရေးဌာနခွဲသည်အချိန်ဇယားဆွဲခြင်းကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည် - သို့သော်၎င်းတို့သည်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျော်သွားနိုင်သလော။
ဘာနီသည်ကျွန်ုပ်တစ်လျှောက်လုံးပြောဆိုနေခဲ့ရာနှင့်ဆေးခြောက်တားမြစ်ချက်သည်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်မညီသောလူမျိုးရေးဘက်လိုက်မှုဆိုင်ရာဥပဒေဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ပါကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရစုဆောင်းခြင်းအတွက်ကိုက်ခဲသည့်စမ်းသပ်မှုနှင့်ဆင်ခြင်တုံတရားအခြေခံကိုပျက်ကွက်လျှင်ကော။ သူသည် ၁၉၇၀ တွင်ကွန်ဂရက်ကရွေးချယ်ခဲ့သောရွေးချယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကိုင်စွဲထားသည့်အမှုဆောင်အရာရှိဖြစ်မည်လော။
အကယ်၍ ၎င်းသည်အလွန်ဝေးလွန်းလျှင် - ကွန်ဂရက်ကသူ၏အမှုဆောင်အမိန့်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန်ပြုနိုင်သည် - သို့သော်ဆေးခြောက်ဆေးခြောက်ကို CSA မှဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကသူ့ကိုတရားစွဲရမယ်။ အိုင်ဒါဟိုသို့မဟုတ်အင်ဒီယားနားကဲ့သို့သောစတုရန်းပြည်နယ်သည်အမေရိကန်ကိုတရားစွဲလိမ့်မည်။ ဒါကထွက်အလုပ်လုပ်ဖို့အချိန်ယူလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် Bernie ယုံကြည်စိတ်ချမယ်ဆိုရင်လက်ရှိဆေးခြောက်ကိုအချိန်ဇယားဆွဲခြင်းဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်မကိုက်ညီဘူး၊ ဥပဒေရဲ့မူရင်းနဲ့တရားဥပဒေမူရင်းအရလူမျိုးရေးမညီမျှမှုကသူ့ယုံကြည်ချက်ကိုထောက်ခံပါတယ်။
သို့သော်သူသည်အတိုချုံး။ ဖက်ဒရယ်ဆေးခြောက်ဥပဒေများကိုပြenfor္ဌာန်းခြင်းမပြုရန်သူ၏အုပ်ချုပ်ရေးကိုညွှန်ကြားနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအမိန့်များရင်ဆိုင်ရသောပြproblemနာကြီးများမှာသမ္မတများသည်ကွန်ဂရက်ခွင့်ပြုချက်မရပဲဥပဒေများချမှတ်ခြင်းနှင့်လက်ရှိလုပ်ပိုင်ခွင့်များမှဖယ်ရှားခြင်းတို့ကြောင့်အာဏာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့် Bernie Sanders အမှုဆောင်အမိန့်အားဖြင့်ဆေးခြောက်တရားဝင်နိုင်ဘူး
ဒါကအမှုဖြစ် - သူကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်နိုင် - ဒါပေမယ့်သူကတရားဝင်စိန်ခေါ်မှုနောက်မှပြbe္ဌာန်းမဖြစ်နိုင်ပါ။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အလုပ်အမှုဆောင်အမိန့်၏ဘောင်အခန်းကဏ္ play မှပါလိမ့်မယ် - ဥပမာ, ဥပဒေပြုပြင်ဆင်ချက်လုပ်နေတာနှင့် CSA ကနေအမှန်တကယ်ဖယ်ရှားပစ်မည့်အစားဆေးခြောက်ဥပဒေများပြenfor္ဌာန်းရန်မသည်သူ၏အုပ်ချုပ်ရေးညွှန်ကြား။
ဒါဟာအငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်လိမ့်မယ်။ ၁၉၄၀ ပြည့်နှစ်လောက်ကတည်းကဂျပန်လူမျိုးအမေရိကန်တွေကိုစခန်းထဲပို့လိုက်တယ်။
Oငါတို့ Eisenhower သည်အများပိုင်ကျောင်းများကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သောအခါ။ ထိုအမိန့်များသည်ထိုအချိန်ကအငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်သော်လည်းစိန်ခေါ်မှုမရှိခဲ့ပါ။
ဆေးခြောက်တရားဝင်သည်အလွန်လူကြိုက်များသည်။ အလွန်လူကြိုက်များသဖြင့်သင်သည်အကြိုက်ကိုရိုက်ပြီးဆေးခြောက်တရားဝင်ခြင်းသတင်းကိုစာရင်းသွင်းသည်။ 2:00 pm မှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့။
ဒါဆိုဒီနေရာမှာသင်၌ရှိသည် - Bernie သည်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအမိန့်ကိုလုံးဝရေးသားနိုင်သည်
ငါ့ကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့ - အင်တာနက်အမှားပဲ။
By: David Silvers
အိုင်အိုဝါကော့ကေးဆပ်စ်အကြိုတွင်အထက်လွှတ်တော်အမတ်ဘာနီဆာဒါ (I-VT) ကတိထားတော် ပြည်နယ်အာဏာပိုင်များကသူ၏ပထမဆုံးနေ့၌ဆေးခြောက်ကိုတရား ၀ င်အမိန့်အရတရားဝင်ဖြစ်စေရန်။ Sanders သည်အီလီနွိုက်ပြည်နယ်၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Pritzker ထံမှအလားတူပြောင်းရွှေ့မှုမျိုးဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ဖမ်းဆီးခံရသူများ၏မှတ်တမ်းများကိုဖော်ထုတ်ရန်ကတိပေးခဲ့သည်။
စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကတိတွေအားလုံးလိုပဲဥပဒေရေးရာနဲ့လက်တွေ့အတားအဆီးတွေလည်းရှိတယ်။ ဖက်ဒရယ်အဆင့်တွင်ဆေးခြောက်ကိုတားမြစ်ထားသောထိန်းချုပ်ထားသောပစ္စည်းများ။ ရှိခဲ့သည် ရှည်လျားသောသမိုင်း CSA အောက်ရှိဆေးခြောက်ကိုပြန်လည်ခွဲခြားရန်ပျက်ကွက်သောကြိုးစားမှုများ CSA လည်း ခွင့်ပြု ရှေ့နေချုပ်သည်ကွန်ဂရက်ကိုကျော်လွှား။ စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်မှတစ်ဆင့်ဆေးခြောက်ကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ရန်။ သို့သော်စည်းမျဉ်းချမှတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်ရှည်လျားပြီးဗျူရိုကရေစီယန္တရားဖြစ်ပြီး၊ ပထမနေ့တွင်စန်ဒါ (သို့) မည်သူမဆိုဖြတ်သန်းရမည့်အရာမဟုတ်ချေ။ Nevermind, သင်တန်း, Sanders ဖြစ်ကောင်းသည်သူ၏ရှေ့နေချုပ်တစ်နေ့ One အတည်ပြုခဲ့သည်ရှိသည်မဟုတ်ကြလိမ့်မည်ကြောင်း။
အခြားဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုရှိပါတယ်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်အိုဘားမားအုပ်ချုပ်ရေးတွင်အမှုထမ်းနေသောဒုတိယရှေ့နေချုပ်ဂျိမ်းစ်ကိုးလ်သည်ဆေးခြောက်သုံးစွဲမှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ လမ်းညွှန်ချက်စာချွန်လွှာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကိုးလ်စာချွန်လွှာ။ The Cole Memo သည်ဆေးခြောက်ကိုတရားဝင်ဖြစ်သောပြည်နယ်များရှိ CSA ၏ဘက်လိုက်မှုအားဖယ်ရှားပစ်ရန်တရားရေးဌာနတွင်မူဝါဒချမှတ်ထားသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ရှေ့နေချုပ် Jeff Sessions သည် Cole Memo ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီး CSA ၏ပြenforcement္ဌာန်းချက်ကိုဒေသခံဖက်ဒရယ်အစိုးရရှေ့နေများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ချန်ထားခဲ့သည်။ ရှေ့နေချုပ် Sessions ၏မှတ်စုတိုသည်ဖက်ဒရယ်ပေါ်လစီသည်မည်မျှလွယ်ကူစွာပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုပြသသည့်စာမျက်နှာတစ်မျက်နှာသာရှိသည်။
လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာတရား ၀ င်သောနယ်ပယ်တစ်ခုမှထိုးထွင်းသိမြင်မှုအချို့ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကောက်ယူနိုင်သည်။ အိုဘားမားအစိုးရသည်လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒနှစ်ခုဖြစ်သော DAPA (အမေရိကန်မိဘများ၏ရွှေ့ဆိုင်းလှုပ်ရှားမှု) နှင့် DACA (ကလေးသူငယ်များရောက်ရှိမှုအတွက်ရွှေ့ဆိုင်းလှုပ်ရှားမှု) ကိုစတင်ခဲ့သည်။ DAPA နှင့် DACA တို့ကိုအခြေခံသည် အစိုးရရှေ့နေသမ္မာသတိသို့မဟုတ်ဥပဒေစိုးမိုးရေးသည်အရင်းအမြစ်အကန့်အသတ်နှင့်ဥပဒေချိုးဖောက်မှုကဲ့သို့သောစဉ်းစားချက်များကို အခြေခံ၍ ဥပဒေကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်အကောင်အထည်ဖော်ရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြောရလျှင် DAPA နှင့် DACA သည်အစိုးရမှလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေများကိုလူအများစုအပေါ်ဆန့်ကျင်ရန်အစိုးရမှငြင်းဆိုသည့်အစီအစဉ်များဖြစ်သည်။
၂၀၁၅ အမှု၌ DAPA ကိုတရားရုံးချုပ်သို့အပြည့်အ ၀ စိန်ခေါ်ခဲ့သည် တက္ကဆက် v ။ ယူနိုက်တက်စတိတ်တရားရုံး၏ 4-4-XNUMX အုပ်စုခွဲအရပျ၌အစီအစဉ်ကိုထားရှိရာ။ တရားရုံးချုပ်သည်မကြာသေးမီက DACA တွင်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကိုကြားနာခဲ့သည် အမိမြေလုံခြုံရေးဌာန v ။ ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ် Regents၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ဇွန်လတွင်မျှော်လင့်ရမည့်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စဖြစ်သော်လည်းဖက်ဒရယ်အစိုးရသို့မဟုတ်ဤကိစ္စတွင်သမ္မတစန်ဒါသည်မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိဖက်ဒရယ်ဥပဒေ၏ပြsection္ဌာန်းချက်ကိုပြenfor္ဌာန်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အားများစွာပြောပြလိမ့်မည်။
ထို့အပြင်ဆေးခြောက်ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခံရသည့်လူအမြောက်အများကိုလွှတ်ပေးရန်ဘာနီ၏အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကော။ ဒါကအများကြီးပိုပြီးဖြောင့် - ရှေ့ကိုမေးခွန်းဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ သမ္မတ၏လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အာဏာကိုအမေရိကန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၊ အပိုင်း ၂၊ အပိုဒ် ၁ တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းသည်သမ္မတအား…စွပ်စွဲပြစ်တင်မှု မှလွဲ၍ ကျန်အမေရိကန်အားပြစ်မှုများအတွက်အပြစ်ပေးခြင်းနှင့်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးရန်အာဏာရှိရမည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အာဏာသည်ဖက်ဒရယ်ပြစ်မှုများအတွက်သာကန့်သတ်ထားသော်လည်း (ထို့ကြောင့်နိုင်ငံတော်ဆေးခြောက်ခံယူချက်နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ) သမ္မတ၏ခွင့်လွှတ်မှုအာဏာတွင်အခြားအဓိပ္ပါယ်ရှိသောကန့်သတ်ချက်များမရှိဟုယေဘူယျအားဖြင့်လက်ခံထားသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါတွေအားလုံးဟာလုံးဝယူဆချက်ဖြစ်နိုင်တယ်။ သမ္မတဘာနီ (သို့) ဒီမိုကရက်တစ်ဆန်ခါတင်စာရင်းအင်းပညာရှင် Bernie တစ်ယောက်တောင်ရှိ ဦး မယ်ဆိုတာငါတို့မသိဘူး။ ဒါပေမယ့်လက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်တရားဝင်ကိစ္စအဖြစ်? အခွင့်အာဏာကအကြံပြုပုံရသည် ဟုတ်တယ်သူလုပ်နိုင်တယ်!